SERASERA, TENY MALAGASY: 18/03/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 18/03/11
18 Mars 2011, 21:38pm
Zafy-Ratsiraka-Ravalomanana "Bye bye" Simao
«Tsy nahomby ny fifampiraharahana», hoy ireo filoha telo mirahalahy dia i Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary Albert Zafy. Notsipahan’izy ireo tanteraka ilay sori-dalan’ny Dr Simao iraky ny mpanelanelan’ny SADC.
Miantso ireo filoham-pirenena mpikambana ao anatin’ny vondrona SADC, hihaona amin’ny faran’ny volana izao izy telo mirahalahy mba handinika maika ny toe-draharaha. Ny Filoha Ravalomanana, izay niteny amin’ny anaran’ny filoha telo miarahalahy, dia nilaza omaly fa tsy mahomby io sori-dalana io satria manome vahana tanteraka ny mpitondra tsy ara-dalàna izay namerina tamin’ny toerany ilay praiministra teo aloha mba hitarika governemanta hiaraha-mitantana sy tsy mitanila mba hikarakarana fifidianana eo ambany fiahian’ny vondrona iraisam-pirenena.
Raha niditra nivantana an-tariby tao amin’ny Magro moa Atoa Ravalomanana omaly dia nilaza fa “coup d’Etat” hafa manaraka indray iny, tsy hahazo fankatoavana eo ! “Miantso ny SADC izahay hanaiky fa tsy nahomby ny fanelanelanana nampanaoviny. Ny fijerin’ny vahoaka Malagasy ireo mpanelanelana dia mitanila, manampy ny fanjakana tsy ara-dalàna”, hoy ihany i Marc Ravalomanana izay mitondra ny tenin’ireo filoha telo. Notohizany fa fanitsakitsahana tanteraka ny hasin’ny vahoaka Malagasy izay ao anaty fahantrana izao zava-mitranga izao. “Niezaka izahay ny hifampiraharaha amin’ny alalan’ny SADC mba hiverenan’ny fandriam-pahalemana sy ho an’ny tombontsoan’i Madagasikara…sarotra aminay ny hino fa hitazam-potsiny ny fitohizan’izao fitondrana tsy ara-dalàna izao ny SADC sy ny vondrona iraisam-pirenena” raha araka ny fijerin’ireo filoha telo hatrany. “Ny fifampiraharahana tsy mbola vita nefa dia nanangana governemanta vaovao ny filohan’ny mpanongam-panjakana. Na dia eo aza ny filazan’ny sori-dalan’ny SADC fa tokony ho governemanta iraisana no hatsangana, ary ny praiministra dia tokony ho avy amin’ny ankolafy hafa mba tsy hampitanila ny fitondrana, mandra-pahatonga ny fifidianana” raha araka ny fanamarihan’izy telo mirahalahy izay samy filohan’ny ankolafy amin’ny anarany avy.
“Tsy firaharahana tsotra izao ny voasoratra ao anaty sori-dalana izao fanendrena ny olona tena akaiky azy izao, ho praiministra. Tokony handray fepetra haingana ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba hamahana ny olan’ny vahoaka Malagasy”, hoy ihany ny filoha Ravalomanana izay mitondra ny tenin’ireo filoha telo. Mitsimbadika tanteraka izany ny rasa ankehitriny satria miharihary toa vay an-kandrina loatra ny tsy fanarahana ny fifanekena na dia efa teo aza ny ezaka amin’ny fifampiraharahana nasehon’ireo ankolafy telo mba ho famahana ny krizy.
Tabera Randriamanantsoa “Governemanta tsy ho lasa lavitra io”
Efa nampoizina ihany ary hita mihitsy fa sinema ny fanendrena an’i Camille Vital ho praiministra, araka ny nambaran’i Tabera Randriamanantsoa avy amin’ny ankolafy Zafy Albert.
Mandika tanteraka ilay sori-dalana izany hoy izy, satria voalaza mazava ao fa tsy mitovy ankolafy amin’ny filohan’ny tetezamita ny praiministry ny marimaritra iraisana. Ny rehetra anefa, hoy ihany ity mpikambana amin’ny ankolafy Zafy ity dia efa hatry ny ela no nahalala tsara fa iray tarika ihany i Andry Rajoelina sy Camille Vital. Aminy dia tsy misy azo antenaina amin’ny governemanta hijoro eo ary azo antoka fa tsy hanaiky an’izany ny sehatra iraisam-pirenena, satria tsy mbola ahitana taratra mihitsy ny fiaraha-mitantana ny zava-misy amin’izao fotoana, fa dia ireo mitovitovy hevitra ihany no miaraka sy mifamadibadika toerana eo, hoy ihany i Tabera Randriamanantsoa.
Ny mampalahelo fotsiny, araka ny nambarany dia ireo namana mpanao politika sasany avy ao amin’ny Ankolafy telo, namadika palitao ka nanaiky ny hiditra amin’ny zavatra hafahafa tsy ho lasa lavitra io. Mikasika ny raharaha Mamy Rakotoarivelo kosa dia tsy nisalasala ity mpitari-tolona ao amin’ny Ankolafy telo ity nilaza fa misy ambadika politika ny fanenjehana sy fanagadrana ity mpitarika ny ankolafy Ravalomanana ity. Tahaka izao indrindra no nambarany : “Nosamborina sy nogadraina i Mamy Rakotoarivelo satria tsy nety nanao rangopohy ilay sori-dalana teny Ivato, efa izany no fomba fanaon’ny FAT dia ny manenjika sy managadra ireo rehetra tsy mitovy hevitra aminy, na tsy mety miaraka aminy”.
Nanamafy i Tabera Randriamanantsoa fa tsy miova ny tanjon’ny Ankolafy telo dia ny fametrahana tetezamita iaraha-mitantana eken’ny ankolafy politika eto Madagasikara sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena, ary fanatanterahana ny tena fampihavanam-pirenena, izay efa azo atomboka sahady amin’ny alalan’ny famoahana ireo gadra politika rehetra sy ny famelàna ireo filoha mirahalahy teo aloha hody an-tanindrazana.
Faminanian'i Sabberah : Kandida 2 tsy afaka ho fidiana, volkano hipoaka…
Voaporofo sy voamarina hatreto fa saika marina avokoa ny voalazan'i Shabberah ilay mpaminany vavitokana aty Afrika mikasika ny raharaham-pirenena misy eto amintsika. Nambarany fa saika nohenoin'ny fitondrana avon'ny tetezamita avokoa izay rehetra nolazainy ary tsy vitsy tamin' ireny no notanterahin'ny fitondram-panjakana.
Anisan'izany ny fandraisan'ny fitondrana FAT ilay daty nambaran'i Shabberah fa tokony hanatontosana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin'ity taona ity dia ny volana Septambra ho avy io.
Kandida roa tsy ho afaka hiatrika fifidianana
Manoloana izay indrindra anefa dia nanambara i Shabberah fa hisy olona lehibe roa hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena no ho tratry ny tsy hampoizina ka tsy afaka ny hiatrika izany amin'ny fotoana farany. Noho ny raharaham-pitsarana izay tsy maintsy holalovan'izy ireo no anton'izany araka ny fanazavana azo. Mbola hifanahatsahaka ihany mantsy hoy izy ny raharaha eny anivon'ny fitsarana amin'ity taona 2011 ity. Maro ireo "dossiers" mbola tsy voatsara no tsy maintsy hotsikafonina ka anisan'ireny ny raharaha 07 Febroary izay nahafatesana olona marobe teny Ambohitsorohitra. Olona lehibe roa no hiatrika io fitsarana io araka ny nambaran'i Shabberah ihany. Mety ho voasazy mihitsy ireo olona lehibe roa ireo araka ny nambaran'i Shabberah ihany.
Ankoatra ity raharaham-politika izay mbola mavaivay ity dia nanome ny heviny mikasika ireo olona mifofo ny ain'ny filohan'ny fitondrana avon'ny tetezamita Andry Rajoelina i Shabberah, zava-nitranga teny amin'ny marais Masay ary mbola hitazonana an'i Mamy Rakotoarivelo atao fanadihadiana eny amin'ny DST mandritra ny 15 andro.
Ho an'i Shabberah dia tsy tokony hanana fahasahiana hanao izany ny tsirairay satria faralahikelin' ny mpanao pôlitika malagasy ny filohan'ny fahefana avon'ny tetezamita ary mbola ho filoham-pirenena madio ara-dalàna hitondra an'i Madagasikara any aoriana any. Tsy latsa-danja amin'izany ny hafatra hampitainy ho an'ireo mpanao pôlitika dia ny tokony hifantohan'ny tsirairay avy am-bavaka ary mipetraka amin'ny anaran'i Jehovah sy Jesoa Kristy indrindra ireo manantena ny hitondra. Na iray andro mantsy na roa andro no hitondran'ny olona iray ny firenena, hoy ihany i Shabberah dia olom-boatendrin'Andriamanitra izy ary avy amin' Andriamanitra.
Loza hafa mety hitranga
Mikasika ny eto amintsika indray dia ny loza an'habakabaka, ny an-tanety ary ny an-dranomasina no tokony hotandremana tsara hoy ihany i Shabberah. Na izany aza … (Suivre le lien)
Ing. Radanoara Julien-Aorian'ny fivorian'ny Troika
« Mety mbola hiova ilay soridalana fa miandry ny fanapahan-kevitry ny SADC»
Na ilay fivoriana aza anefa, araka ny nambaran-dRavalo, dia mbola nahemotra ho amin'ny faran'ny volana. I Simao no nisisika ny hanaovana azy anio nefa tsy raikitra
Izay havoaka amin'ny fivorian'ny Troika eo anivon'ny vondrona SADC, izay nahemotra ho amin'ny 31 marsa indray, no hamaritra farany ny ho fandehan'ny toe-draharaha politika sy izay hiafaran'ny krizy eto amintsika. Ho tavela ary hijanona ho mpanohitra ny tetezamita ve ny ankolafy telo ? Hahazo fankatoavana ve ny fitondrana FAT sy mpanara-dia azy ? Ny hita aloha nandritra ity herinandro ity ka hatramin'ny omaly dia samy manao izay ho afany ny amin'ny ho fibatana ny amboara ny roa tonta. Mandeha avokoa ny lalana ambanin'ny tany rehetra ka nihazakazahana ny fihaonana tamin'ireo filoham-panjakana mpikambana ao amin'ny Troika. Samy manana delegasiona lasa any ivelany avokoa na ny mpitondra na ny mpanohitra niresaka mialoha ity daty ity. Raha ny fahitan'Ing. Radanoara Julien, manampahaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena dia miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny Troika ny fandehan-javatra rehetra sy ilay soridalana. « Raha ohatra ka tsy manaiky an'iny ny Troika dia mety mbola hiova ny … (Suivre le lien)
Fandalina / Tena lalina ity !
Mandeha ila indray ve izany ity resaka famahana na famaranana ny krizy ity ? Toa ny teo ihany mantsy no eo raha ny lehiben'ny governemanta nofidiana tamin'ny listra natolotr' ireo antoko sy vondrona pôlitika no jerena. Mba nisy olon-kafa ihany tao saingy indrisy. Ary dia manamafy ny toerany moa ny lehiben'ny faritra rehetra raha jerena ny hamaizana niarahaba ny lehiben'ny governemanta vaovao sady tranainy.
Mihetsiketsika mafy koa etsy an-kilany ny ankolafy telo ary toa milaza mihitsy fa tsy miroso fa toa mihemotra hatrany ity resaka hoe fitondram-panjakana iraisana amin'ny tetezamita ity. Any ivelany moa ny solontenan'ireo ankolafy telo ireo mihezaka mandresy lahatra ny fianakaviambe iraisam-pirenena fa tsy mandeha amin'ny laoniny ny tondro-zotra eny fa na dia ny fanatanterahana izay voalaza ao fotsiny aza.
Dia ahoana indray izany raha toa tsy … (Suivre le lien)
Ravalomanana Marc : Miantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena hanamafy ny sazy ho an'ny FAT
Manamafy hatrany ny antso fanamelohana ny HAT sy ny fampiharana izany ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Anisan'ny fanambarana navoakan'ny ankolafy Ravalomanana avy any Afrika Atsimo izany, ny 16 Martsa teo ary nosoniavin'ny mpitondra teny Guy Rivo Randrianarisoa. Mampahafantatra ny sakana mahazo azy telo mirahalahy filoham-pirenena teo aloha ihany koa Ravaloma-nana Marc, toy ny tsy ahafahany miverina an-tanindrazana. Toy izany koa ny "notam" mahazo ny amiraly Ratsiraka Didier. Nasiany teny ao anaty fanambarana ihany koa ny fampitahorana ny profesora Zafy Albert amin'ny fanenjehana ity farany eo anatrehan'ny lalàna.
Mahakasika ilay sori-dàlana natao sonia teny Ivato farany teo, dia … (Suivre le lien)
Ange Andrianarisoa : "Tsy mamaha olana iny tondro-zotra iny"
"Tsy nalain'i Dr. Siamo akory ny hevitry ny ankolafy pôlitika telo, indrindra tsy noraharahiny akory ny soskevitry ny ankolafy Didier Ratsiraka tamin'ny fanaovana iny "feuille de route" na tondro-zotra natao rangopohy teny Ivato iny" hoy ny Pr. Ange Andrianarisoa. Ho an'ity lehiben'ny delegasiôna avy amin'ny ankolafy Didier Ratsiraka ity dia "olona sy antoko ary vondrona pôlitika mitovy firehan-kevitra na manakaiky amin'ny mpitondra no nanao iny "feuille de route" iny. Mazava ho azy fa mbola "unilatéral" ny Praiministra notendrena avy amin' izany "feuille de route" izany hoy izy fa tsy Praiminisitra iraisana izany.
"Tsy marina mihitsy fa niala tamin'ny "processus de médiation" izahay ao amin'ny ankolafy telo. Nanolotra sosokevitra tany amin'i Dr. Simao sy ny filoha Chissano izahay. Mba hanamafisana izany dia nangataka ny hisian'ny fihaonana an-tampony eto Antananarivo izahay fa tsy … (Suivre le lien)
Fikambanana "Gender Links" tany Toamasina : Nampianatra vehivavy hanao Politika
Vehivavy miisa 22 avy amin'ireo fikambanana isan-tsokajiny sy avy amin'antoko politika miisa 8 ao Toamasina sy mahavelona Foulpointe no nahazo fiofanana mikasika ny fanaovana politika sy fiatrehana fifidianana nandrindra ny roa andro avy amin'ny fikambanana "Gender Links" tao an-tampon-tanànan'i Toamasina omaly.
Anisan'ny fandaharan'asany fikambanana ny fampiroboroboana ny vehivavy amin'ny lafiny ara toe-karena sy politika. Noho ny fahatsapan' ity fikambanana ity fa mbola vitsy ireo vehivavy no tsy tafiditra eo amin'ny fitantanan-draharaha ara-panjakana eto amin'ny firenena raha oharina amin'ny lehilahy nefa ny vehivavy no maro an'isa sady misy ny manampahaizana ihany koa. Anisan'ny antony … (Suivre le lien)